Home Somali News Al Shabaab oo weerar ku qaaday madaxtooyada Baydhabo!
Ururka Al shabaab ayaa labo goobood oo ku yaala magaalada Baydhabo weeraro ku qaaday iyagoo u kala adeegsaday qarax ismiidaamin ah iyo dagaal toos ah.
Weerarka koowaad ayaa lagu qaaday goob u dhow xarunta Madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed oo fariisin u ah ciidamada dowladda Soomaaliya iyadoo kooxda weerarka soo qaaday ay ka fuliyeen goobta qarax ismiidamin ah iyo dagaal in badan socday oo u dhaxeeya Ciidamada iyo kooxda Al shabaab.
Isla koox ka tirsan Ururka Al shabaab ayaa la sheegayaa in ay weerar ku qaadeen xerada ciidamada Militeriga qaybta 60-aad oo ay fariisin u yahay Ciidamada AMISOM, Waxaana dagaal uu dhex maray kooxda iyo ciidamada AMISOM.
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo markii weerarka dhacayay ku sugnaa Baydhabo ayaa warbaahinta u sheegay in ragga weerarka soo qaaday ay ahaayan ilaa 3 ruux isla markaana dhamaantood ku dhinteen weerarkaas.
Madaxweynaha Maamulka Koonfurgalbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ku sugnaa gudaha xarunta Madaxtooyada oo ku taala xaafada Isha ee Magaalada Baydhabo markii weerarka dhacayay, waana uu ka badbaadey weerarka al Shabaab ku qaadeen.
Wararkii u dambeeyay ayaa sheegaya in ugu yaraan 9 qof lagu diley weerarka oo ay ku jiraan saddexdii ruux ee weerartay xarunta madaxtooyada oo uu ku sugna Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xassan Sheikh Adan.
Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Cabdifataax Geesey ayaa BBC-da u sheegay in ay ciidamada ilaalada madaxtooyada iska caabin xoogan sameyeen isla markaana ku guuleysteen in ay toogtaan.
Waa weerarkii u horeeyay lagu qaado xarunta madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo oo al-Shabaab ay sheegatay.